ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ): အမေတမ်းချင်းကဗျာများ (၂)
အိပ်မက်တို့ ရှင်သန်နိုးထရာ၊ စိတ်ကူးတို့ လွန့်မြူးရုန်းကြွရာ
ကျွန်တော့်ဦးလေးရေးခဲ့တဲ့ အာခေရဒ်က ပြုံးပြပါ ကဗျာစာအုပ်ထဲက ကဗျာတွေကို ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပထမပိုင်းကို ဖတ်ချင်သူတွေကတော့ အမေတမ်းချင်းကဗျာများ မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းရိပ်၊ ကန်ရိပ် ၊ထနောင်းရိပ်နဲ့
ရင်ခွင်မှေးအိပ် အမေ့ရိပ်ကို မှီဘူးတဲ့.....။
အမေမရှိရင် အသရေ မရှိ
နေရာအနှံ့ ခြေမဆန့် နိုင်ရကား
သူ့ရဲ့ အစား တို့များအတွက်
ကောင်းကင်ဘုံထဲ ပြန်သွားပြီ..............။ ။
ဂျန္နတ် = နိဗ္ဗာန်
ဒီကဗျာထဲက သဘာဝမကျတာလေးတစ်ခု အမှားလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါလေးတစ်ခုကတော့ “ရှင်ကြီး ဂေါတမ မြတ်ဗုဒ္ဓတောင် အမေ့ကျေးဇူး ဆပ်ပေဘူးသည် တရားဦးေ၇အေး တိုက်ကာကျွေးလည်း နို့ကြွေးတစ်ဖက် ကျေဘူးတဲ့......။ ”
ဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်က ရေးထားတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတောင် ကွဲကွဲ ပြားပြားမသိကြသေးတာမို့ ခွင့်လွှတ်လို့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
အပြစ် ဂွန္နာ မရှိပါလျက်
လူတွေ့တိုင်း မာ့ဖ် တောင်း
ဆဘာရ် လုပ်ရင်း သည်းခံရင်းနဲ့
ဂွန္နာ = အပြစ်
မာ့ဖ် = ခွင့်လွှတ်မှု
ဆဘာရ် = သည်းခံခြင်း
ဂျွမ္မာအ်နေ့တိုင်း ပြန်လာပါ............။ ။
ဂျွမ္မာအ်နေ့ = သောကြာနေ့
အာခေရဒ် = တမလွန်
ဒွန္နယာ = လောက
နမာဇ် = ဘုရားဝတ်ပြုမှု
ကုရ်အာန် = အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ ကျမ်းစာ
သေချာဖွေရှာနေရာအနှံ့ စိတ်ခြေဆန့်ခဲ့ ပြီးလေပြီ.....။
သမုဒ္ဒရာ မဟာတံတိုင်း အတွင်းပိုင်းဝင်
မဟာမြင့်မိုရ် ရွှေတောင်အိုရဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာ ထိုနေရာမှာ
ခဲရာခဲဆစ် ရှစ်မျက်နှာအရပ် နှံ့စပ်ဖွေရှာ မောလှပါပြီ
သတိရမြဲ လွမ်းဆွတ်ဆဲပါ ချစ်သောအမေ မေမေရယ်
လွမ်းဆွတ်နေမြဲ သတိရဆဲမို့ နေ့ညအခါ မမေ့ပါဘဲ
အလ္လာ အေဘာဒါသ် မပြတ်ဆောင်ရွက် ပြုလုပ်လျှက်မို့
သုခရိပ်မြုံ အထက်ဘုံမှာ လုံးဝအားမငယ်ပါနဲ့နော်....................။ ။
အေဘာဒါသ် = ဘုရား တရား အလုပ်
သားတို့ကျန်ခဲ့ တစ်ခြမ်းပဲ့ ကမ္ဘာ
အသည်းမှာ အတိအကျ သိလိုက်ရပြီ
အမေ့နံဘေး ကဘာရ် ဘေးမှာ
အမေ့နေရာ ဖြစ်စေသော်(၀်)..................။ ။
ကဘာရ် = သင်္ချိုင်းမြေပုံ
သရက်ထည်နဲ့ နှစ်သက်ဖွယ်သော အို ............မိခင်...။
သားတို့ရဲ့ စိတ် အမေ့စိတ်တည့်
သားရဲ့ ကတိ အမေသိလို့
အားရပါးရ ပြုံးပြပါ.............။ ။
ရွှင်အေးကြည်သာ ပြုံး မျက်နှာနဲ့
သံယောဇဉ်အလှ သည်းသော တို့ အမေ
အကြီး အငယ် အရွယ် အလတ်
အယုတ် အမြတ် မရွေး .....ဇာတ်....။
သူ့ဝါသနာအထုံ ရှိသမျှကုန်ရင်သာ ကုန်ပလေ့စေ
သတင်းစကား ကြားလျှင် ကြားချင်း
မိုးကြီးကအောက် မြေကြီး အပေါ်
ထိုအခါမှ ကြားရတဲ့ အခင်း အမေ့သတင်းကြောင့်
ရတဲ့ အမြတ် အကျိုး စ၀ါဗ် အားလုံး
အမေ့အတွက် ဖြစ်စေသော်(၀်).............။ ။
ယာစင်(မ်)စူရာ = ကျမ်းတော်မြတ် အနှစ်ချုပ်
တကယ်တော့ ဒီစာအုပ်ထဲက ကဗျာတွေအားလုံးဟာ ဦးလေး ဦးနေ၀င်းချစ်တစ်ယောက်ထဲ ရေးထားတဲ့ ကဗျာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးလေးက ညီအကိုတစ်တွေ နာမည်နဲ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာကိုးပုဒ်မှာ သူက နေ၀င်းချစ်၊သာစည်၊ နေ၀င်းချစ်၊နဂါးနီ၊ စတဲ့ ကလောင်နာမည် နှစ်မျိုးသုံးပြီးထည့်ကာ ကျန်တဲ့ကဗျာတွေကိုတော့ ညီအစ်ကိုတစ်တွေ နာမည်တပ်လိုက်တာပါ။
အားလုံး ခံစားလို့ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အာရဗီ ဘာသာစကားတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ...................။ ။
Posted by ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) at 1:11 AM
Labels: ကျွန်တော်ကြိုက်သော ကဗျာများ
မအိမ်သူ January 30, 2012 at 2:42 AM
ခက်ဆစ် ရှင်းလင်းချက်လေးတွေနဲ့မို့ အားလုံးဖတ်ပြီးရင် နားလည်ကြမှာပါ..
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) January 30, 2012 at 7:49 PM
အာရဗီ ဘာသာစကားတွေကြောင့် ပိုလို့ သဘောကျမိတယ်။ အစ်မ မသိသေးတာတွေ သင်ယူလိုက်ရ၊ သိခွင့်ရလိုက်လို့ပါ။ တကယ်ကို အနုပညာဝါသနာကြီးမားတဲ့ မျိုးရိုးက လာတာပဲနော်။ ဦးလေးရေးတဲ့ ကဗျာတွေကို ဖတ်သွားခဲ့တယ် မောင်လေး။
ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး စကားလေးတစ်ခွန်း
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ် တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူဘယ်လောက် သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ။
(ဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင် မကွယ်လွန်မီ သားဖြစ်သူအား မှာကြားခဲ့ပြီး အလွန်နာမည်ကြီးသွားသော မှတ်သားစရာစကားလေးတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။)
ရွှေစွန်ညို ဘာကို လိုလို့ ၀ဲပါတယ်
“ညှောင့် ..... ညောင့်... ညောင့် .... ညှောင်း..... ညှောင်း..” စူးစူးဝါးဝါးနှင့် အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လာသော အသံကြောင့် ကျွန်တော် အလိုလို မ...
ဆ…ဆရာကြီး…စပ်ဖြီးဖြီး ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) ယခုတော့ ကျွန်တော်သည် ဆရာတစ်ယောက်၏ ပီတိအဟုန်ဖြင့် ရင်ခုန်နေသော နှလုံးသားအစုံကြောင...
2013, February, Treasure Land Magazine. ပန်းချီသရုပ်ဖော်- ကိုကိုနိုင် ** ဟာ ….. သားကလဲ။ မင်းဒေါ်လေးကို လိုက်ပို့ခိုင်...
from Google အချစ်ဆိုတာကို အေးသီတာဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပါယ်မဖွင့်ချင်ပါဘူး။ ဖွင့်လည်းမဖွင့်တတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ စာဆိုက၀ိ ပညာရှိတွေသာမက သာမန်လူသားတေ...
၉၆၉၊ မိတ်ထီလာ၊ အကြမ်းဖက်ပဋိပက်ခနှင့် အစ်စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ လွတ်လပ်သောအမြင်
၉၆၉၊ မိတ်ထီလာ၊ အကြမ်းဖက်ပဋိပက်ခနှင့် အစ်စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ လွတ်လပ်သောအမြင် ဒီပြသနာက ဘယ်က ဘယ်လို စတင်ခဲ့သလဲဆိုတာ အရင်းစစ်ကြည့်...
ရွှေစွန်ညို ဘာကိုလိုလို့ ၀ဲပါတယ်
( ((((( အရင်တုန်း ကဘလော့ဂ်မှာ တင်ပြီးသား ပို့စ်လေးပါ။ အောက်တိုဘာလထုတ် ချင်းတွင်းရွှေပြည် ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခံရလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ ) )...
ဒီညကျမှ တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေသည်။ မနက်လင်းဖို့ စိတ်စောနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာကိုမှ မတွေးတောချင်တော့ဘဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျေ...
ဆဲဗင်းဂျူလိုင် (၅၁)နှစ်အလွန် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများနှင့် ကျောင်းသားထုကို ဦးထိန်းပဲ့ပြင်ရေး
ဆဲဗင်းဂျူလိုင် (၅၁)နှစ်အလွန် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများနှင့် ကျောင်းသားထုကို ဦးထိန်းပဲ့ပြင်ရေး ဆဲဗင်းဂျူလိုင် ၅၁ နှစ်ပြည့် ဆဲဗင်းဂျူ...
ကောင်မလေး……ညည်းဖတ်ဖို့ ငါရေးလိုက်တယ် ( ပိုးဟေသီကို အသက်နှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရကဗျာ ) ဟဲ့ ....ကောင်မလေး ညည်းနဲ့...
ကျွန်တော်ကြိုက်သော ကဗျာများ (2)
ကျွန်တော်တို့ခေတ် တက္ကသိုလ် (3)
မျှဝေခံစား စာလေးများ (3)
ရသစာတမ်း (အက်ဆေး) (1)
အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင် (13)
ကောလိပ်ဂျင်စာမျက်နှာ(Collegians' Pages) (3)
လေးစားအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ (2)
Wai Moe Naing
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ မိန်းမသား၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်၊ ကိုယ...
အွန်လိုင်းပေါ်က စာရေးဆရာ၊ ဆရာမ များ
witch 83 ၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ
ခင်ဦးမေ-khin oo may
Job for myanmar
E-mail တစ်စောင် - တကယ် သတိရနေပါတယ်။ အဲဒီထက် ... ဘယ်လို ပိုပြောလို့ ရသေးလဲ ဆက်သွယ်ပေးပါ ။ ။ မောင်ရေချမ်6းMarch 2017
ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ - Facebook, Twitter, Instagram စတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ အသုံးပြုနေနကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေထဲမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုပါ...
သက်တံရောင်တံလျှပ် - ရွက်ဝါ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေစ နွေဦးတစ်ညနေတွင် အနှစ်နှစ်အလလက တမ်းတခဲ့ရသော အလွမ်းများ၏ မြစ်ဖျားခံရာသို့ ပြန်လည်ခြေချနိုင်ခဲ့လေပြီ။ တစ်ခါတစ်ရံ ငိုချင်လောက်အေ...
ကျွန်မချစ်မိ အပြစ်ရှိသည် - သံယောဇဉ်ဖြင့် နှောင်ငင်တွယ်ရစ်၊ ကျွန်မချစ်မိ အပြစ်ရှိသည်…. တွယ်ငြိခြင်းဖြင့် ရင်တွင်းဆူုးနစ်၊ ကျွန်မချစ်မိ အပြစ်ရှိသည်…. အတွယ်အတာ ဘယ်အရာဖြစ် ဖယ်ခွာလို့ရ က...
""ကိုယ့်မေတ္တာ"" - တိုးတိုးတိတ်တိတ် ၊ နှုတ်ဖျားထိပ်မှ ဖွဖွရေရွတ် ၊ လွတ်ကျစကား သူ့နားသို့ဝင် ၊ ရင်ကမကြားေေ မေ့သွားလေသလား ။ ကြင်နာယုယ ၊ ချစ်ရသလောက် နှနေ နှစ်ယောက်မရှိ ၊ မေတ္တြာ...
ဝေးကွာခြင်း၏အခြားတစ်ဖက်၌ - မေလေး(ကန္ဒရ၀တီ) - ( ၁ ) “ မောင်” နှုတ်ခမ်းဖျားက ခပ်ဖွဖွလွတ်ထွက်သွားသော နာမ်စားတစ်ခုအား ကျွန်မ အချိန်မှီ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ မြင်လိုက်ရသည့် ပုံရိပ်တစ်ခုက ကျွန်မ နှလုံးသားကို ...